Raad Raac News Online – Sawiro: Caleemasaarka Madaxweyne Farmaajo oo Dareen gaara xambarsana Maanta
Maanta oo ah 22 Febraayo waxaa magalada Muqdisho lagu caleemo saaray madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, xafladda ayaa lagu marti qaaday madaxda Dalalka Kenya,Itoobiya, Suudaan,Jabuuti iyo wakiilo la socday in ka baddan 115 dal, sidoo kale ururada QM.EU.Africa.IGAD,safiirro iyo marti sharaf kale ayaa xafladda joogay.
Madaxwaynayaashii hore Shiikh Shariif iyo Xassan Shiikh Maxamuud oo khudbado jeediyayna waxay ballan qaadeen inay si dhow ula shaqayn doonaan madaxwaynaha cusub, waxayna soo jeediyeen tallooyin looga bixi karo xaaladdaha adag ee hadda jira.
Madaxwaynayaasha goobta fadhiyay sida Kenya,Jabuuti iyo ku xigeenka Suudan iyo Ra’iisul Wasaraha Itoobiya ayaa dhankooda sheegay iney ku faraxsan yihiin ka qayb galka xafladda caleemo saarka madaxwaynaha cusub, dhankooda iney sii xoojinayaan wada dhaqaynta ay Soomaaliya la lee yihiin ayay tilmaameen.
Waddama badan oo carbeed oo lagu martiqaaday ayaan ka soo qaybgelin waxayna taasi muujinaysa sida Carabta aysan u doonayn wanagga soomaalida.
Sawiradii Maanta Sawir Qaade Cali Ducaale